Ciidamada Booliska oo gacanta ku dhigay askarigii dilay Deeqa Daahir Faarax – Bandhiga
Ciidamada Booliska oo gacanta ku dhigay askarigii dilay Deeqa Daahir Faarax
Ciidamada Booliska dowladda Federalka Soomaaliya ayaa soo qabtay askari shalay ku dilay Magaalada Muqdisho gabar 9 jir ah oo dhiganeysay iskuulka Hoyga Xamar xili ay saarneed gaarigii Iskuulka.
Dilka ayaa dhacay shalay duhurkii 18-kii September 2018, kadib markii ciidan katirsan dowladda isku rasaaseeyeen meel u dhaw Isbitaalka Digfeer, waxaana Deeqa Daahir Faarax oo ah gabadha dhimatay haleeshay mid kamid ah rasaastii ay soo rideen ciidanka is rasaaseeyay.
Hay’adaha amaanka dowladda ayaa xusay in ninkan iyo labo askar oo la socotay iney ka dambeeyeen rasaastii la isweydaarsaday waxaana lagu qabtay howlgal gaar ah oo ay sameeyeen ciidamada Booliska.
Xarunta dambi baarista ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa la geeyay, askartan la soo qabtay si baaris loogu sameeyo, sidoo kale ehelada gabadha yar ee la dilay ayaa u mahadceliyay dowladda federaalka gaar ahaan ciidamada booliska ee ninkan soo qabtay.
Deeqa Daahir Faarah Allaha u naxariistee fasalka Koowaad ayey dhiganeysay, waxayna aheyd gabar yar oo aad u jecel waxbarashada, islamarkaana ku hanweyneyd inay mustaqbal wanaagsan yeelato, sida ay warbaahinta u sheegeen waalidiinteeda.
Dadka Soomaaliyeed ayaa aad uga xumaaday dilka loo geesto gabadhan da’da yar iyagoo dowladda ka codsaday in cadaaladda la hor keeno cidii falkan ka dambeesay.